Ụbọchị My Pet » Ụzọ Isi Nagide Mgbe a gbasaa
Yipụ Ben & Jerry na. Na igbe nke anụ ahụ. N'ihi na ọ bụ oge ga-esi n'ebe ahụ ma na-etinye ndụ gị azụ ọnụ. Ọ na-adịghị ga-dị ka ụfọdụ n'ụzọ ọrụ ebube ihunanya film ebe ị ntabi gafere onye na-aga na-esonụ na ntabi anya. Ma site na-si n'ebe ma na-eburu gị n'uche-arụsi ọrụ ike na ị ga-eche echiche dị ka ihe dị ukwuu banyere ezumike-na oge na-aga mmetụta ga-agwụ na-apụghị ịhụ anya eri na-latching jidesie gị obi ga-agbaji na enyemaka nke ndị na-esonụ atọ nhọrọ:
Ma ọ bụ ọrụ gị ma ọ bụ ọrụ afọ ofufo ma ọ bụ a ngwakọta nke ma ma ọ bụ mahadum ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ahụmahụ, na-lekwasịrị anya na. Cheta na ihe ndị a bụ maka ọdịnihu gị na adịghị ka ụfọdụ ezumike-elu-esi na ụzọ n'agbanyeghị na ọ nwere ike na-eche nnọọ ike n'oge ghara. Ọzọkwa ị pụrụ ile otu mgbede klas. Dị adịghị eyi onwe gị na usoro. Na-ewe ihe ị na na na na na ike maka!
Gwa ya na ndị mmadụ na ị na-eche banyere. Ezie na-etinye on a stiif elu egbugbere ọnụ na-n'èzí ụwa e nweghị ihere na-agbasa ma na-ekwe ka mmetụta gị na ezumike na-elu-vulnerably igba si ezinụlọ na ndị enyi. Nke a ga-ikpochapụ uche gị na gị isi nke ndị na-anya mmiri na-bursting pụọ ma ị maara ya ma ọ bụghị. N'ihi ya, ọtụtụ ndị na-agbalị ịnagide a ezumike-elu na ha onwe ha na ọ bụghị ike. Site n'iso ndị bụ ndị hụrụ unu banyere ihe na-ewute gị n'aka nke ị ga-enwe ike na ụwa na a ukwuu chawapụrụ echiche nke udo na chawapụrụ anya.
Ama m na mgbe ụfọdụ na ọ pụrụ isi ike nwere fun mgbe ị na-emejọ. Ma na-agbalị gị hardest inupụ site na ya n'ihi na ọ ga-abụ ọnụ ahịa ya na ọgwụgwụ. Pụọ (mgbe ị na-agaghị mebiri!) na onwe gị obi ụtọ na ezinụlọ ma ọ bụ enyi na ụlọ mmanya, na concerts ma ọ bụ egwú, wdg … -Ahapụ gị nsogbu n'ezinụlọ. Nọgidenụ na-onwe gị nwere mmasị na obi ụtọ na ntụrụndụ dị ka ịgụ akwụkwọ, na-ege ntị ma na-ekiri TV music. Ekwela ka onwe gị ida kemgbe onye ị bụ n'ihi na mgbe ị na-eme ọ pụrụ ịbụ a siri ike n'ụzọ azụ ebe ị nọ. Were oge gị na-achọta ọhụrụ ịhụnanya. Echela nrụgide site na onye ọ bụla na-eme otú. Na gị onwe gị oge, ka ịhụnanya na-.
Jụ ibelata mbụ AFỌ
3 Ihe I Kwesịrị Ịmara Ọ bụrụ na Ị Chọrọ Ya mehie